Xbox Series X na E3 2020 ga-atọ ụtọ karịa ka anyị chere - BGR - TELES RELAY
Xbox Series X na E3 2020 ga-atọ ụtọ karịa ka anyị chere
By TELES RELAY On Feb 20, 2020
Ma Microsoft gosipụtara ọgbọ ọzọ Xbox tupu E3 2020, anyị nwere ike dịkarịa ala ịtụ anya nnukwu ụlọ ọrụ site na ụlọ ọrụ na mmemme azụmaahịa a. Ọbụghị naanị na ọ ga - abụ oge izizi na ndị ọha na eze nwere ike inweta aka ha na Xbox Series X, mana Sony ekwenyelarịrị na ọ bụ kwuo ihe ngosi a n’afọ a, nke pụtara Microsoft ga-enwe ndọkụkọ ikuku n'onwe ya.
N’atụghị egwu, onye isi Xbox Phil Spencer chọrọ iji ohere ọ bụla na-anọghị na Sony n’oge ọkọchị a.
Na-aza onye na-akwado ya na Twitter, Spencer kpughere na ya na ndị otu ya nwere nzukọ iji kparịta atụmatụ ha maka E3 2020 na Valentine'sbọchị Valentine'spo ,bọchị, wee kwughachi otu usoro mgbasa ozi ga-esi nwee obi ụtọ:
.@OriTheGame pụrụ iche, na-agụ ihe ndị dị n'ime si na ndị na-egwu egwu, egwuregwu Ọnwa ọzọ dị ịtụnanya. Nzukọ ọzọ nke E3 bụ taa, ọtụtụ isiokwu maka mkparịta ụka site na E3 na Pọtụfoliyo zuru ezu nke egwuregwu XGS maka E3. @aarongreenberg rụọ ọrụ ya. Oge mmalite nke njikwa bụ naanị ihe pụrụ iche.
- Phil Spencer (@ XboxP3) February 14 2020
XGS, n'ezie, na-anọchite Xbox Game Studios, nke bụ ogwe aka mbipụta na egwuregwu egwuregwu nke ndị otu Xbox. Site na Xbox Series X ọnwa ole na ole ịhapụ ya, anyị echeburu na E3 2020 ga-abụ mmemme ebe anyị ga-ahụ ọtụtụ n'ime aha mpio mmalite oge mbụ, mana tweet Spencer gosipụtara nke a. Ọbụlagodi na Sony hapụrụ E3, ọ ka kwesịrị ijupụta na ozi na ọkwa maka ọgbọ na-abịa.
Banyere mkpughe zuru oke nke Xbox ọhụrụ, ikekwe anyị agaghị echere ruo June maka ozi ndị ọzọ. Jenụwarị 1, Ọnụ ya nchịkọta akụkọ nchịkọta akụkọ Tom Warren kwuru nke ọma na eri na Debeghachi na mkpughe zuru oke erute “tupu E3”. Ọ dị ka o doro anya n'oge ahụ, mana ebe ọ bụ na anyị erutela n ’elekere nke February were ntakịrị site na Sony ma ọ bụ Microsoft, ụfọdụ ndị egwu na-amalite iche.
Anyị amatabeghị oge anyị ga-echere iji hụ ihe niile Xbox Series X ga-enye, mana ozi ọma maka ndị Xbox Fans bụ na usoro nke atụ anya ga-abịarute na Xbox One n'ime izu ole na ole. Ka Spencer zoro aka na tweet ya, Ori na uche nke wicks amalite oru 11.
Isi ihe ngosi: Xbox
Jekọb bidoro ikpuchi egwuregwu vidio na teknụzụ dị na kọleji dị ka ihe ntụrụndụ, mana ọ bịara doo anya ngwa ngwa na nke a bụ ihe ọ chọrọ ime maka ndụ. Ọ bi ugbu a na New York ma dee maka BGR. Enwere ike ịchọta ọrụ ya ebipụtara na TechHive, VentureBeat na Game Rant.
BGRencorena-akpali akpalil39E3anyịụgwọ ezumike nkáserausoro
Mgbuka: mgbuchapụ nke Ngarbuh: Herman Cohen na-akpọ ndị ICC ka ha nyochaa ọchịchị nke Biya
Adam Savage to redo Silicon Valley Comic Con: Pizarro - ndị mmadụ